Isagoo u hadlayay telefoonka ayaa hadda noqday arrimuhu ugu dambeeyay. No, waxaan aan ku tilmaamayaa in la hadlo qof kale oo dhinaca kale ee casriga ah. Waa wadahadalka la telefoonka laftiisa! Hordhac kaaliyayaashooda cod shakhsi ee casriga ah ayaa abuuray kacaanka ah in industry casriga ah iyo waa hab heer sare ah oo xiiso leh in la sameeyo casriga ah user ka badan saaxiibtinimo iyo functional. Waxa dhan ku bilaabantay Siri ka Apple, si deg deg ah ku xiga Google Haddaba Android. Cortana, kaaliyaha codkaaga Microsoft Windows Phone ay ka mid tahay ugu danbeeyay inay ku soo biiraan xisbiga.
Qaybta 1. Waa maxay Siri, Google Hadda iyo Cortana
Qaybta 2. Google Hadda VS Siri VS Cortana
Qaybta 3. Funny Talis & Jawaabaha u Siri, Google Hadda iyo Cortana
1.Apple ee Voice Kaaliyaha: Siri
Siri waa kaaliyaha cod caqli ka Apple loogu talagalay markii hore loogu talagalay iPhone iyo iPad ka dib lagu daray in sidoo kale. Siri asal ahaan ahaa codsiga macruufka ah ee ay soo Siri Inc. iyo qoraalkii ay ahaayeen qorsheeyay in ay sii daayaan u Android iyo Blackberry aad. Apple helay shirkadda on April 2010 oo baajiyay horumarinta barnaamijyada aan Apple.
Siri markii ugu horeysay lagu soo bandhigay in macruufka ah 5 on iPhone 4s sii daayay bishii October 2011. Bishii September 2012, macruufka 6 ayaa la sii daayay iyo Siri lagu daray 3-gen iPad. Dhammaan qalabka la sii daayay ka dib markii October 2012 qoreysa Siri. Erayga Norwegian 'Siri' waxaa loola jeedaa 'naag soo jiidasho aad keentay in guul'. Siri leeyahay dabeecad iyo jawaab codkaaga fari jawaabaha caqli badan. Haddii aad rabto in aad soo wacdo qof, aan fariin u dirno, caleenta wax internet-ka, soo dir email ama calan kor u dhacdo, Siri waxay kaa caawin kartaa jidka oo dhan.
Wixii la isticmaalayo Siri, waxaad inaan riix badhanka guriga iyo Siri arbushin ilaa weydiisan doonaa "Waxa aan kaa caawin karaan?". Siri ayaa cod ku dhow dabiiciga dumar ah iyo sidoo kale qaban karin wada hadal aan sugnayn funny idinla. The qalabka taageeraya Siri la joogo waa iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPad Air, iPad Mini, iPad Mini isha, jiilka 3aad iyo 4aad iPad iyo iPod Touch jiilka 5aad.
2.Google ee Voice Kaaliyaha: Google Hadda
Google Hadda waa caawiyaha codka ka Google, marka hore soo bandhigay in Bean ka Jelly (4.1) update ah ee nidaamka qalliinka Android ee July 2012 ka dib, waxaa la sameeyey Apple macruufka iyo Google Chrome qalabka oo dhan. Waa asal cod amray codsiga raadinta ah oo ka jawaabi karaan oo ay dib kula hadlayaa. Google Hadda ma ciyaari dabeecad Xasaasi ah iyo ku xigeen ka ah cod aad u fudud. On wax qalab Android, adiga oo riixaya badhanka guriga dhawr ilbiriqsi codsiga Google Haddaba furi doonaa. Waxaad ku amri karaa wax kasta oo aad u baahan tahay iyo Google Hadda waxa kuu samayn doonaa.
Google Hadda kuu sheegi karaan dhibcaha hawada iyo isboortiga. Waxaad ka heli kartaa waddada caga aad khariiradda isticmaalaya Google Hadda iyo waxa kale oo aad ka fiirin kartaa xaalad gaadiidka si aad u socoto ee soo socota. Haddii aad la labanlaabo on boosteejo dhulka hoostiisa ah, jadwalka tareenka on Google tusi doonaa Hadda. Waxaad samayn kartaa ballamaha iyo dhacdooyinka taariikheed ee aad via Google Hadda oo kuu soo sheegi doona waqtiga saxda ah. Waxaad ka eegi kartaa xaaladda duulimaad aad, haddalka, loogu badalo lacagaha iyo raadin wax online adigoo isticmaalaya Google Hadda. Waa xirmo buuxda u kaaliyaha cod marka laga reebo qayb shakhsiyadda ah.
3.Microsoft Windows Phone ee Voice Kaaliyaha: Cortana
Cortana waa magaca kaaliye cod cusub oo Microsoft ayaa soo bandhigay for Windows Phone 8.1. Waxaa markii hore soo bandhigay ee April 2014 oo weli beta version ay. Version beta waxaa la heli karaa for Windows Phone oo dhan 8.1 qalabka kaliya Maraykanka iyo la filayaa in uu hirgaliyo dhammaan dalalka kale ee 2015. Magaca Cortana waa khayaalka, laga soo qaatay caqli aan dabiici ahayn (AI) qof ah lagu taswiiray kulan Halo ah.
Cortana uu leeyahay aragti aad u minimalistic iyo higayaa eg orb ah aamusnaan ah. Waxay leedahay shakhsiyad la mid ah ka ciyaarta Halo iyo ka jawaabaa su'aalaha oo dhan aad soo jiidasho leh si habsami leh. Waxaad samayn kartaa wax walba oo aad u baahan tahay ee aad taleefan adoo la hadla Cortana. Tani waxaa ka mid ah sida loo diro, fariimaha diraya, samaynta xusuusinta, hubinta cimilada, Oo wuxuu baadhaa internet iwm Ma aha in aad si uu u qabto hoos u muhiim ah Start ee bilaabay Cortana. Waxaa si toos ah bilaabay karaa iyadoo la isticmaalayo Key Search ah.
Daar button hardware isticmaalaya No Haa Haa
Web search Haa Haa Haa
Farriimaha Saadaasha ah Haa No Haa
Event wargelin ku salaysan No No Haa
Wac ama text xiriir Name Haa Haa Haa
Ballan jadwalka Haa Haa Haa
Danaha Set Haa No Haa
Hubi cimilada Haa Haa Haa
Gunaanadka xiiso Daily Haa No Haa
Tilmaamaha Haa Haa Haa
Jawaabaha su'aalaha feestada No Haa Haa
Play music soocaa sida ku sifayn ama artist Exclusive Play in Macaamiishan Music Haa Haa
Funny Talis & Jawaabo: Siri
"Siri, Ma i jeceshahay?"
"Aad raadineyso weeyna jacaylka oo dhan meelo qaldan."
"Waa maxay macnaha nolosha?"
"Dhammaan raadadkii taariikhda soo jeedinaya waa shukulaatada."
"Yaa aad aabo?"
"Waxaad tahay. Karaa waxaan aad u hesho dib u hadda u shaqeeyaan?"
"Aad ii guursadaan?"
"Heshiiska aan End User Licensing ma dabooli guurka. Raali My."
"Waxaan ahay dhaawacan. Iigu yeedhina ambalaas."
"Hadda laga bilaabo, waxaan idinku 'ambulance' wici doonaa. Waayahay?"
Funny Talis & Jawaabo: Google Hadda
"Iga dhig rooti ah?"
"Igu Ray Scotty."
"Anigu taas ma samayn karaan kabtanka, ma ahan in aan awood" (in a lahjadda Scottish u cabsi badan)
"Markii aan ahay?"
"Joogo ayaa, dabcan. Shaqeynta Tardis weli hoos horumarinta, ka xumahay."
"Baadhaa baxo uuna u qaadan kartaa inta uu nool yahay, laakiin meel wanaagsan oo laga bilaabo waa dhagax weyn classic."
"Intee in le'eg oo qoryo Chuck woodchuck haddii woodchuck ah Chuck yaabaa yaabaa qoryo?"
"Woodchuck A Chuck lahaa qoryihii uu kari dhan haddii woodchuck ah qoryo Chuck laga yaabaa."
Funny Talis & Jawaabo: Cortana
"Farsamo ahaan, in uu noqon lahaa Bill Gates. No arin wayn."
"OK, waxaan u baahan doonaa qorshe. Waxaan ka shaqeyn doonaa in ay ka badan aadanaha, oo aad ka shaqeeyaan in ay ka badan digital."
"Waa kuwee waa ka wanaagsan yahay: Cortana ama Siri?"
"Ma aha in ay ku faana, laakiin sida muuqata aan doonayaa inaan caawiyo badbaadin caalamka ee ku saabsan 500 sano."
"Maxaad u malaynaysaa ee Android?"
"Magaca adag. Toban dhibcood magaca"
"Yaa aad abuure?"
"Kaalaya, oo madax, Anigu ma siin karto dhamaan qarsoon aan ..."
> Resource > Android > Siri VS Google Hadda VS Cortana: sida u fiican ee